bhegi rekurara rakabatira
Envelop vakarara bhegi
Amai akarara bhegi
Tende remauto & bag rekurara
Gadzira tende nyowani
na admin pa 20-07-25
Usati wagadzira tende, iwe unofanirwa kuziva ichave tende rinoshandiswa uye mhando nharaunda ichave iri tende rinoshandiswa, sekumisa misasa, kukwira, mahombekombe, mauto, kana sekuvanda kwezuva, ndiyo inoshandiswa munzvimbo inotonhora kana inopisa. Nzvimbo, kune mhepo yakasimba nemvula, pane chero chinodiwa here. ...
Ungaita sei kugadzira chikwama chekurara kuti chikwane kuenzanisa nekushisa tembiricha?
na admin on 20-06-10
Paunenge uine nyoro kana RFQ yebhegi yekurara, asi mutengi wako asina chero zvataurwa, anogona chete kukupa zvaunoda kuti tembiricha yacho ichashandiswa kana tembiricha ipi. Ungaita sei kugadzira bhegi kuti rukwane nechinangwa? Chii chichava chinhu chikuru fo ...
Maitiro ekugadzira an-snag yekurara bhegi
na admin on 20-04-18
Mupoteri, inotevera inogona kubuda muCCID 19
na admin on 20-04-05
COVID 19 idenda pasi rese. Global kutarisisa kubva China kuenda Japan, Korea, Iran, Italy, Germany, US. Mhosva nyowani dzakatenderedza zviuru makumi matanhatu ezuva nezuva, pane 1,2 miriyoni kesi naApril 5th Icho chichava nyaya hombe kubvira Hondo Yenyika II uye kudana kushandira pamwe kwenyika yose, hutachiona hauzive kuti ndiwe ani, hapana ma ...
Mauto kurwisa tende
na admin on 20-03-11
Mbiri Mauto ekurwisa tende akagadzirirwa kushandiswa oga mune chero mamiriro. Nyika dzakasiyana nenzvimbo zvine chimiro chakasiyana. Kunyangwe chero nzvimbo, iyo tende yemauto ehondo ine yakanyanya kuwanda. Iyo yemauto ekurwisa tende kazhinji inosanganisira zvikamu zvishanu, muviri muhombe, furemu, kuruka mapepa, kutakura bhegi & kugadzirisa ...
2017 Europe kwekunze kwakanaka muFriedrichshafen
na admin on 18-09-04
2017 ORSM muSalt Lake
by pamusoro 18-07-24
2017 HK Gift uye shoma zvakanaka
2017 China chinokosha anoratidza muRussia
2016 Europe panze wakanaka Friedrichshafen
2015 ORSM muSalt Lake
2015 Europe panze wakanaka Friedrichshafen
2014 Spoga muna Colonge
2014 Europe panze wakanaka Friedrichshafen
2013 spoga uye Gafa muna Colonge
2013 Europe panze wakanaka Friedrichshafen
2012 Europe panze wakanaka Friedrichshafen
Kuvaka 1, beitang maindasitiri paki, hehai Road, Changzhou, Jiangsu dunhu, China
Ungaita sei kugadzira bhegi rekurara kuti rikwane ...
© Copyright - 20108-2020: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.